မဗေဒါရဲ့ ဗေဒါလမ်း: Rotorua, New Zealand အိပ်မက်ကမ္ဘာ ရိုတိုရူဝါ
City by City ရေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ စာဖတ်သူတွေအတွက် Rotorua မြို့လေးအကြောင်း ကျွန်မသိသလောက်အပြင် အဲ့ဒိမှာ နေထိုင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်မတို့ခရီးစဉ်နဲ့ မြို့လေးအပေါ်ကျွန်မရဲ့ ခံစားချက်ကို Overall လေးပြောပြပါမယ်။ နောက်ပိုစ့်တွေကျမှ တစ်ရက်ချင်း Detail ပြန်ရေးပေးမယ်နော်။
Rotorua မြို့လေးက အပေါ်က မြေပုံထဲမှာမြင်တဲ့အတိုင်း နယူးဇီလန် မြောက်ပိုင်းကျွန်း အလယ်နားလောက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ သူကတကယ်တော့ နွေရာသီ(Dec ကနေ Feb) ဆို တခြားနယ်က နယူးဇီလန်သားတွေလာလည်ကြသလို၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည် အများအပြားလာလည်ကြတဲ့ မြို့လေးလဲဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ကျွန်မတို့သွားတဲ့ မေလက သူတို့ဆီမှာ ဆောင်းဦးဆိုတော့ အလည်အပတ်လာသူ ရှားပါးတဲ့အချိန်ဖြစ်နေလို့ မြို့တွင်းထဲမှာ လူတောင် သိပ်မရှိပါဘူး။ မနက်ပိုင်းဆို လူအနည်းငယ်တွေ့ရပြီး ညနေ ၆နာရီလောက်ဆိုတာနဲ့ လမ်းပေါ်မှာ လူတွေ့ရင် ဝမ်းသာစရာလို့တောင် ထင်မိလာတယ်။
ညဘက်ဆိုရင်လဲ အာရှသားတွေဖွင့်တဲ့ စတိုးဆိုင်လေးတွေ၊ စားသောက်ဆိုင်လေးတွေကလွဲလို့ ကျန်တဲ့ ဆိုင်တွေက အကုန်ပိတ်တာ စောပါတယ်။ အဲ… အရက်ဘားလေး တစ်ခု နှစ်ခု ဖွင့်တာတော့ တွေ့မိပါတယ်။ လူလေး ကခြောက်ချီး ကခြောက်ချက်ပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရိုတိုရူဝါမြို့လေးဟာ တိုးရစ်တွေလာလည်များတဲ့ မြို့ဖြစ်နေတာ အလကားတော့မဟုတ်ပါဘူး။ သူ့ဆီမှာ သူ့မြို့လေးမှာချည်း ထူးခြားတဲ့ ရေမြေသဘာဝတွေရှိနေပါတယ်။
သူက ရေပူစမ်းတွေ၊ နဂါးဗွက်အိုင်တွေလို ရွှံဗွက်အိုင်အပူတွေ၊ သဘာဝ ရေနွေ့ငွေ့ကန်တွေ၊ သဘာဝ လှိုဏ်ဂူတွေနဲ့ စွန့်စားရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေအတွက် လုပ်စရာ ကစားစရာတွေ အပုံအပင်ရှိတဲ့ နေရာလေးပါပဲ။ သူတို့ဒေသမှာရှိတဲ့ သဘာဝအလှအပတွေကို အခြေခံ မပျက်စီးစေပဲ လာလည်တဲ့သူတွေဆီကနေ ပိုက်ဆံကို သဲ့ရနေစေမဲ့ အစီအစဉ်လေးတွေ Activities လေးတွေ လုပ်ထားတာ တကယ်ကို သင်ယူသင့်တဲ့ ကိစ္စတွေပါ။ ဥပမာ တောလမ်းထဲ စက်ဘီးစီး၊ တောင်တက် စတဲ့ အစီအစဉ်မျိုးတွေပေါ့။
ဒီရိုတိုရူဝါမြို့လေးနဲ့ တဝိုက်က မဗေဒါရဲ့ သွားမယ်ဆိုပြီးရှာခဲ့တဲ့ Research လေးထဲက သွားလည်စရာနေရာလေးတွေကို ပြောပြရရင်
၁။ Wai-O-Tapu Thermal Wonderland
Champagne Pool (Photo from http://tedchang.free.fr/Polynesia/index3.html)
စာထဲနဲ့ မြေပုံထဲအရတော့ ရိုတိုရူဝါနဲ့ သိပ်မဝေးလှပါဘူး။ မိနစ် ၂၀လောက်ပဲ ကားမောင်းရတယ်ဆိုပါတယ်။ ပြဿနာက ကိုယ်က ကားမောင်းလာတဲ့သူမဟုတ်ရင် ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတာပါ။ (အောက်မှာ ရှာထားခဲ့သမျှ အင်ဖိုတွေနဲ့ ကိုယ်ကြုံရတဲ့ အခက်ခဲတွေကို Transportation အနေနဲ့ရေးပေးပါ့မယ်) သူက သဘာဝရေပူးစမ်းတွေ၊ ထူးခြားတဲ့ မီးတောင်ရဲ့ သင်္ကေတတွေရှိတဲ့ နေရာလေးပါ။ ကမ္ဘာမှာ နာမည်ကြီးလှတဲ့ သဘာဝ ရှန်ပိန်ရောင်ရေကန် (Champagne Pool)၊ ပွက်နေတဲ့ ရွှံ့အိုင်တွေ၊ အငွေ့တွေထွက်နေတဲ့ မြေကြီး၊ လှပတဲ့ တောတောင်ရေမြေရှုခင်း၊ ကြီးမားတဲ့ မီးတောင် ချိုင့်ဝှမ်းကြီးတွေနဲ့ လှေကားထစ် ထုံးကျောက်တောင်တွေရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ အဲဒိမှာ “The Lady Knox Geyser” လို့ခေါ်တဲ့ ရေနွေးကန်ဟာ မနက် ၁၀နာရီ ၁၅မိနစ်တိုင်း ပွတ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ရံ အမြင့်ပေ ၂၀အထိကို ပွတ်တယ်ဆိုပါတယ်။ အဲ့ဒိက ခေတ်မီအလည်အပတ်စင်တာမှာ နယူးဇီလန်းပြန် လက်ဆောင်ပစ္စည်းမျိုးစုံနဲ့ အတွင်းအပြင် ထိုင်လို့ရတဲ့ စားသောက်ဆိုင်လေးလဲရှိတယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဒီနေရာလေးကို မဗေဒါ အရမ်းသွားချင်ခဲ့ပေမဲ့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ နောက်တစ်ခေါက် နယူးဇီလန်းသွားဖို့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲပေါ့။
The Lady Knox Geyser (Photo from Tripadvisor)
နေရာလေးရဲ့ လိပ်စာက -
Wai-O-Tapu Thermal Wonderland, 201 Waiotapu Loop Rd, RD3, Rotorua Central, Rotorua, 3073, New Zealand
27kms (20mins drive) from Rotorua,
53kms (40mins drive) from Taupo
၂။ Waimangu Volcanic Valley
(Photo from http://www.thehindu.com/features/metroplus/travel/smoke-on-the-water/article4150519.ece)
Waimangu မီးတောင် တောလမ်းမှာ ကမ္ဘာပေါ် သက်တမ်းအနုဆုံးသဘာဝရေပူထွက်တဲ့နေရာ ပေမဲ့ အကြီးဆုံး ရေပူစမ်းရှိတယ်။ ၃.၈ ဧကကျယ်တယ်။ ဒယ်အိုးရေကန် (Frying Pan Lakes) လို့လဲ ခေါ်ကြတယ်။ ၁၈၈၆ ခုနှစ်မှာ Tarawera (တာရာဝယ်ရာ)မီးတောင် ပေါက်ကွဲရာကနေ စတင်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရေပူစမ်းဖြစ်တယ်။ အဲဒိတောလမ်းတစ်လျှောက်မှာပဲ တခြားကြည့်စရာ ရေကန်တွေလဲ အများကြီးရှိတယ်။ The Emerald Pools, Warbrick Terrace, blue Inferno Crater စသည်ဖြင့် စိတ်ဝင်စားစရာတွေ အများကြီးရှိတယ်။
အဲဒိကိုလိုက်ပို့တဲ့ တိုးလ်တွေရှိတယ်။ ၂ယောက်နဲ့အထက်ဖြစ်ရမယ် ရိုတိုရူဝါအထိ လာခေါ်ပေးတယ်လို့ သိရတယ်။ Rotomahana (ရိုတိုမာဟာနာ) ရေကန်ထဲမှာ အပန်းဖြေ သင်္ဘောစီးမလား၊ တောလမ်းလျှောက်၊ သင်္ဘောစီး ၂ခုလုံးလုပ်မလား ကြိုက်တဲ့ Package ယူလို့ရတယ်လို့ သိရတယ်။ ပျမ်းမျှအားဖြင့်တော့ တစ်နေကုန်တိုးလ်တွေက တစ်ယောက်ကို NZD250 လောက် အနည်းဆုံးရှိမယ်။ (ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားမယ်ဆိုပြီး စဉ်းစားခဲ့ပြီး တိုးလ်ကို ဘယ်မှာဝယ်ရမှန်းမကြည့်ခဲ့မိဘူး)။ ပြဿနာက တကယ်တမ်းကျတော့ ကိုယ့်ဘာသာစီစဉ်ဖို့ သွားရေးလာရေး အခက်ဖြစ်ရတယ်။ သွားမယ်ဆိုပြီး အသေအချာ ရှာထားပြီး ဒီနေရာလဲ အချိန်မလောက်လို့ မရောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။
Lake Rotomahana (photo from http://www.waimangu.co.nz/boatcruise)
08.30 am - 5.00 pm (except January - 6.00 pm)
ကားဂိတ်သို့ လမ်းလျှောက် ကြာချိန်:
၃။ Te Puia, Whakarewarewa Thermal Valley
Te Puia ဆိုတာ နယူးဇီလန်ရဲ့ ခုချိန်ထိ Maori (မာအိုရီ)လူမျိုးတွေရဲ့ ရိုးရားတွေနဲ့ သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသေးတဲ့ ဗဟိုယဉ်ကျေးမှု နေရာလေးပါ။ သူက Whakarewarewa Thermal Valley ထဲမှာတည်ရှိနေပြီး ၆၀ ဟတ်တာကျယ်ဝန်းပါတယ်တဲ့။ Pohutu Geyser (ရေနွေးငွေ့ကန်)ဟာလဲ အဲဒိ Whakarewarewa တောလမ်းထဲမှာ ရှိတဲ့ ကန်လေးပါ။ Pohutu ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကတော့ “big splash” (ရေပွက် အကြီးကြီး) သို့မဟုတ် “explosion” (ပေါက်ကွဲမှု)လို့ ဆိုပါတယ်။ သူက အဲဒိ နေရာရဲ့ အကြီးဆုံး ရေနွေးငွေ့ကန်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့ တစ်နေ့မှာ အကြိမ် ၂၀လောက် ပေါက်တယ်ဆိုပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါပေါက်ကွဲရင် ရေအမြင့်ပေ မီတာ ၃၀လောက်ထိရောက်တယ်လို့သိရတယ်။ ကျွန်မ Research ရှာစဉ်က အရမ်းကို သွားချင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပေါ့။ သူကတော့ မြို့ထဲကနေ ၅မိနစ်ကားမောင်းရင်ရောက်တယ်ဆိုပဲ။ အဲ့ဒိလဲ အချိန်မလောက်လို့ မရောက်ခဲ့ပြန်ပါဘူး။ (ခုရေးနေရင်းနဲ့တောင် ကိုယ့်ကိုကိုယ် အားမရဖြစ်မိပါတယ်)
၄။ Government Gardens, Museum & Blue Bath Thermal
ရိုတိုရူဝါမြို့ထဲမှာရှိတဲ့ သမိုင်းဝင် ပန်းခြံနားမှာရှိတဲ့ Tudor-style spa ရေချိုးအိမ် ကို Blue Baths လို့ခေါ်ပါတယ်။ သူကတော့ အထဲမှာ Mediterranean-style public ရေကူးကန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရေကူးကန်ဟာ ကမ္ဘာမှာ အမျိုးသား၊အမျိုးသမီး ၂ယောက်ပေါင်း ရေကူးချိုးခွင့်ကို အရင်ဆုံးခွင့်ပြုခဲ့တဲ့အထဲက တစ်ခုပါတဲ့။ ဆေးဘက်ဝင်တယ်မဝင်တယ်ထက် သူ့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်က အားလုံးပျော်ဖို့အတွက်နဲ့ မိတ်ဆွေဖွဲ့ရင်း ဟောလီဝုဒ်ရုပ်ရှင်တွေထဲက ခံစားချက်မျိုး ခံစားနိုင်ပါတယ်တဲ့။ ခုဆိုရင် Blue Bath ကို မူလပုံဟောင်းအတိုင်း ပြန်လည်မွမ်းမံလိုက်ပြီး ခန်းနားတဲ့ အဆောက်အဦးထဲမှာ ရေနွေးပူပူနဲ့ အညောင်းညာ အပန်းဖြေနိုင်အောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်တဲ့။ သွားရင်တော့ ရေကူးဝတ်စုံလိုပါတယ်။ အဲ့ဒိမှာလဲ ငှားတယ်ဆိုပါတယ်။ အွန်လိုင်းမှာတော့ အလကားဆိုပြီး တကယ်တမ်းတော့ ပိုက်ဆံပေးရပါတယ်။ မဗေဒါတို့ အဲ့ဒိ ပန်းခြံထဲနဲ့ ရေကူးကန်အဝကိုရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ရေကူးကန်ရောက်တဲ့အချိန်က နည်းနည်းနောက်ကျသွားလို့ ပိတ်ခါနီးမို့ နောက်နေ့မှ ပြန်လာတော့မယ်ဆိုပြီး အချိန်မရလို့ မသွားဖြစ်တော့ပါဘူး။
ပန်းခြံထဲမှာ ခန်းနားတဲ့ ပြတိုက်ကြီးလဲ ရှိတယ်။ အရမ်းလဲ လှတယ်။ အဲဒါလဲ မဗေဒါတို့ရောက်တဲ့အချိန် ညနေ ၅နာရီခွဲ ၆နာရီလောက်ဆိုတော့ ပိတ်သွားလို့ အပြင်ကပဲ ဓာတ်ပုံရိုက်ခဲ့တယ်။
ရိုတိုရူဝါမှာ အပေါ်ကရေးခဲ့တဲ့ သဘာဝရှုခင်းအလှအပတွေရှိသလို စွန့်စားတဲ့ အားကစားနည်းတွေ၊ activities တွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သိတဲ့အတိုင်း ဘာလုပ်ချင်ချင် ပိုက်ဆံကုန်ခံနိုင်ရင် အကုန်လုပ်လို့ရပါတယ်။ ရေတံခွန်တွေကြား Rafting, ဂျက်ဘုတ်စီးခြင်း၊ ဘုတ်နောက်ကနေ လေထီးလိုက်စီးခြင်း၊ လှေလှော်၊ ငါးမျှား စသည်ဖြင့် အစုံပလုံနေအောင်ကို ရှိပါတယ်။ isite မှာလဲ flyer တွေ အများကြီးရှိလို့ ကိုယ်ကြိုက်တာ ကိုယ် Book လိုက်ရုံပါပဲ။
Rotorua ရဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေက ကျွန်မတို့ Auckland မှာသုံးတဲ့ AT HOP ကဒ်သုံးလို့မရပါဘူး။ အဲ့ဒါက တော်တော်ဆိုးတဲ့အချက်ပါ။ ဘတ်စ်ကားတွေကလဲ မှတ်တိုင်မှာ ဘာမှ ရေရေရာရာ ရေးထားတာမတွေ့ပါဘူး။ အောက်မှာ Route 1, 2, 3, ဘယ်သွားမှန်း သိပေမဲ့။ လာတဲ့ကားက Route 1 လား2လား မသိတော့ ခက်ပါတယ်။ Local တွေ တည်းခိုခန်းတွေကို မေးလဲ အူကြောင်ကြောင်နဲ့ပြန်ကြည့်ကြပါတယ်။ သူတို့က ကားမောင်းနေကျဆိုတော့ ဘတ်စ်ကား စီးတတ်ပုံတောင် မရကြဘူးထင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ မဗေဒါ ရှာခဲ့တဲ့ Research မှာ အောက်ကအတိုင်းရေးထားပါတယ်။ အဲဒါက အဆင်မပြေခဲ့လို့လဲ ကျွန်မတို့ အပေါ်က ရေကန်တွေကို မရောက်ဖြစ်ခဲ့တာပါ။ (အချိန်မလောက်တာရယ်၊ Mr.Right နေသိပ်မကောင်းတာရယ်လဲပါတာပေါ့) ကိုယ်ကိုတိုင်လဲ ကိုယ့် Research ကို သေချာ ပြန်မဖတ်တာ ပါတာပေါ့လေ။
A one off trip - will cost you $2.80.
A Day Saver Pass - will cost you $7.40. It is valid for 24hrs from the date and time you buy it and represents great value for tourists. It'sabit like the hop on, hop off buses overseas except you will be mixed in with the locals.
Route 1: Kuirau Park, Rainbow Springs and Rainbow Farm, NZ Caterpillar Experience, Skyline Skylines Gondola & Luge, De Flute Glassware, OGO Zorbing, Mitai Māori Village, Agrodome, Agroventures and Zorb.
Route 2: Whakarewarewa Living Thermal Village, Te Puia
ဘတ်စ်ကား information တွေ သိချင်ရင် ဒီဆိုဒ်မှာဖတ်ပါ။ http://www.baybus.co.nz/routes/rotorua/?page=0
Bike rental link (စက်ဘီးအငှားဆိုင် လင်ခ့်)
စက်ဘီးငှားစီးပြီး ပတ်နိုင်ရင်လဲ အဆင်တော်တော်လေးပြေမှာပါ။ ကျွန်မတို့က Waiheke မှာ စက်ဘီးမှောက်တဲ့ Accident ဖြစ်ခဲ့တော့ သူ့ကို စက်ဘီးထပ်မစီးခိုင်းရဲတော့ဘူးလေ။
ကျွန်မတို့ရောက်ခဲ့တဲ့ နေရာတွေ… (Our Itinerary in Rotorua)
အပေါ်က နေရာတွေကတော့ မဗေဒါ ရိုတိုရူဝါရောက်ရင် သွားချင်ခဲ့ပြီး အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် ရောက်တာလဲ ရောက်ခဲ့၊ မရောက်တာလဲ မရောက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေပါ။ ဒါဆို ရိုတိုရူရာမှာ ၁ညအိပ် ၂ရက်နေခဲ့ပြီး ဘယ်တွေရောက်သလဲ မေးစရာရှိလာပါတယ်။ အမှန်တော့ ၁ညအိပ် ၂ရက်ပဲ အချိန်ပေးခဲ့လို့ အပေါ်က နေရာတွေ မရောက်ခဲ့တာလဲပါပါတယ်။ ရိုတိုရူဝါမှာ နေရာစုံသွားချင်ရင်တော့ ၃ည ၄ညလောက်အိပ်ရင်အတော်လောက်ပဲထင်ပါတယ်။
Day 1 in Rotorua
အမှန်တော့ ပထမ ၁ရက် မနက်ပိုင်းနေ့ဝက်က နယူးဇီလန်ရဲ့ လည်စရာနေရာထဲက ပထမဆုံးကိုယ်သိခဲ့တဲ့ Matamata မြို့လေးနားက Hobbit Hole တွေရှိတဲ့ ယာခင်းကိုပါ။ အဲဒိကိုသွားဖို့ နေ့ဝက်တိုးလ်ဝယ်ရပါတယ်။ အွန်လိုင်းကပဲရှာဝယ်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။ အရမ်းကိုလှပြီး တကယ်ကို တိုးရစ် Attraction တစ်ခုပီသတဲ့ နေရာပါ။ အဲ့ဒိနေရာမှာပဲ လူများများစားစားတွေ့ခဲ့ရပြီ ဓာတ်ပုံအမြန်အဆန်ရိုက်ခဲ့ရတာ ကြုံပါတယ်။ လာလည်ကြတဲ့ လူငယ် အနောက်တိုင်းသားတွေများပါတယ်။ အဲ့ဒိနေရာကိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားတာထက် တိုးလ်နဲ့သွားတာ ပိုကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်သွားရင် အဲ့နေရာ လှလှလေးကို အခွံပဲတွေ့မှာဖြစ်ပြီး ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းက အကြောင်းတွေနဲ့ ဘယ်အဆောက်အအုံက ဘာရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဆောက်ခဲ့တယ်။ Hobbit hole တွေရဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ ရုပ်ရှင်ရိုက်တုန်းက အခက်ခဲတွေ၊ စသည်ဖြင့် ဘာမှ သိရမှာမဟုတ်တဲ့အတွက် တိုးလ်းနဲ့သွားတာကောင်းပါတယ်။ (တကယ်လို့ ကိုယ့်အတွက် အဲဒါတွေက အရေးမကြီးဘူးဆိုရင်တော့ သဘောပေါ့)။ ဒါပေမဲ့လဲ ဒီနေရာကို လာတယ်ဆိုကတည်းက ရုပ်ရှင်ရူးတွေများတယ်ဆိုတော့ သိချင်ကြမှာပါလေ။ အမှန်တော့ Hobbiton Tour က ရိုတိုရူဝါကမဟုတ်လဲ အော့ကလန်းကနေ နေ့ချင်းပြန်သွားလို့ရပါတယ်။
ပထမနေ့ညနေပိုင်းမှာတော့ Rotorua မြို့ထဲတစ်ဝိုက်လျှောက်ကြည့်ဖြစ်တယ် Kuirau ပန်းခြံကိုရောက်တယ်။ နောက်နေ့အတွက် သွားလို့ရမဲ့ နေရာတွေကို isite မှာ စုံစမ်းပြီး Booking လုပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ အချိန်ကုန်ပြန်ရော။
Day2in Rotorua
ဒုတိယနေ့မှာတော့ ညဘက်ကားနဲ့ Wellington ကို ဆက်ဆင်းဖို့ရှိတော့ ပင်ပန်းအုံးမှာရော၊ မိုးကလဲ ရွာနေတာနဲ့ မနက်ပိုင်းကို Rotorua မြို့ထဲမှာပဲ ဆက်နေဖြစ်တယ်။ မနက်စာစားပြီးတော့၊ Polynesian Spa ကိုသွားကြတယ်။ အမှန်တော့ အနှိပ်ခံချင်တာ ဒါပေမဲ့ အနှိပ်ခံချင်ရင် ၁ရက်လောက် ကြိုဘွတ်ရတယ်တဲ့။ အဲဒါကြောင့် မရခဲ့ဘူး။ ဒီတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် Honeymooner အဖြစ်ခံစားရအောင် Deluxe Private Pools သည်းသန့် ရေပူစမ်းအခန်းငှားလိုက်တယ်။ ထင်ထားတာထက် ဈေးချိုလို့ တန်တယ်ထင်တယ်။ တကယ်တန်း အဲ့ဒိမှာ သုံးကြည့်တော့လဲ ရတာနဲ့ ပေးရတာ တန်တယ်ထင်တယ်။ အဲ့ဒိ Deluxe Private Pools က ၁နာရီကို NZD 65 ပဲကျတယ်လေ။ ရိုတိုရူဝါကိုသွားရင် Polynesian Spa ကိုသွားဖြစ်အောင်သွားဖို့ တိုက်တွန်းချင်တယ်။
Waitomo Glowworm Cave (photo from http://www.newzealand.com/in/plan/business/waitomo-glowworm-caves/)
နေ့လည်ပိုင်းနဲ့ ညနေမှာ နာမည်ကြီး Waitomo Glowworm Caves (ဝိုင်တိုမို အလင်းရောင်ထွက်တဲ့ အကောင်လေးတွေရှိတဲ့ ကျောက်ဂူ)နဲ့ Ruakuri Cave (ရူဝါကုရီ ကျောက်ဂူ) ၂ခုကို ကားစင်းလုံးငှားပြီး သွားလိုက်တာ ညဘက် ၇နာရီ လောက်မှ ပြန်ရောက်တယ်။ မနက်မထွက်ခင်ကတည်းက တည်းခိုခန်းကို Check out လုပ် အိပ်တွေအပ်ခဲ့တယ်လေ။ ကားက တည်းခိုခန်းရှေ့ဒုတ်ဒုတ်ရပ်ပေးတဲ့အပြင် ကျွန်မတို့ အထုတ်တွေယူပြီး မြို့ထဲပြန်ရမှာမို့ အထုတ်တွေရော ကျွန်မတို့ရောတင်ပြီး မြို့ထဲလိုက်ပို့ပေးတယ်။ အဲဒိ ကားမောင်းဆရာဦးလေးကြီးနဲ့ တစ်လမ်းလုံးစကားတွေပြောရတာ ဗဟုသုတရတယ်။ နောက်မှ Day By Day detail မှာပြောမယ်။ ဒီမှာပြောရင် Detail မသိချင်တဲ့သူတွေ ပျင်းမှာစိုးလို့။
Ruakuri Cave (Photo from http://hello-georgia.com/en/destinations/oceaniaarctic/new-zeland?product=83)
ည ၁၁နာရီ ၄၅ မှ အဝေးပြေးကားကလာမှာဆိုတော့ ၂ယောက်သား ဘယ်ဟောင်ဟောင်ဘယ်ဆိုင်ထိုင်ရမှန်းမသိပေါ့။ သိတဲ့အတိုင်း ၆နာရီခွဲဆို အားလုံးပိတ်နေတာ။ ဒါပေမဲ့ ကိုရီးယား BBQ ဆိုင်ဖွင့်တာနဲ့ (အဲ့ဆိုင်က Rotorua မှာ ညဘက်လူအစည်ကားဆုံးလို့ ထင်တာပဲ၊ ကိုရီးယား တိုးလ်အဖွဲ့တွေလာလာစားတယ်) အဲဒိဆိုင်မှာ ညစာဝင်စားရင် ၉နာရီခွဲလောက်အထိ တောင်းတောင်းပန်ပန်ထိုင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့ဆိုင်ပိတ်တော့ ဘယ်သွားရမှန်းမသိတာနဲ့ Polynesia Spa ဖွင့်သေးလို့ ဖွင့်သေးညားသွားတော့ ကျေးဇူးရှင် Spa ကြီးက Warmly Welcome ပဲ။ အဲဒိထဲမှာ ကော်ဖီဆိုင်ရော wifi ရော ရှိတယ်လေ။ အဲ့လိုမှန်းသိ BBQ ဆိုင်မှာတောင် ထိုင်မနေခဲ့ဘူးပေါ့။ အဲ… နောက် SPA ကလဲ ပိတ်တော့ အထုတ်တွေနဲ့ ကားဂိတ် Isite ရှေ့က ခုံတန်းမှာပဲ သွားစောင့်နေလိုက်တယ်။ ရာသီဥတုက အေး။ မိုးလေးကဖွဲ။ လေအဝှေ့မှာ အေးခနဲ အေးခနဲ ဂိုက်ဂိုက်တုန် ကားစောင့်ပြီး နယူးဇီလန်ရဲ့ မြို့တော် Wellington ကို ညလုံးပေါက် ခရီးဆက်ခဲ့ကြရင်း City By City Rotorua ခရီးစဉ် အကျဉ်းချုပ် ပြီး…။
အားလုံးကို ခြုံငုံ ပြီး ပြောရရင်တော့ Rotorua မြို့လေးဟာ တကယ်ကို အိပ်မက်ဆန်တဲ့ မြို့လေးတစ်ခုပါပဲ။
ရိုတိုရူဝါကို အလည်အပတ်သွားမှာမို့ ပိုစုံစုံလင်လင် သိချင်ရင်တော့ http://www.rotoruanz.com/ မှာ ဖတ်ပါ။
Posted by mabaydar at 6:09 PM
:) love the post so much!!!! Hope i can go there soon ^^
ေမဦးပါစစ္။ လာလည္သြားပါတယ္။ ျပည့္ျပည့္စံုစံုေလးေဖာ္ျပထားလို႔ ဗဟုသုတ ရပါတယ္။
9/03/2015 1:13 AM
Thanks for ur post sis. I wish to go there soon..
9/03/2015 8:45 AM
အမခရၤးသြားတာ ညီမblog ေလးကေန ref ယူတာ
ခဏ ခဏ ဝင္ၾကည့္ျဖစ္တယ္
အခု ကိုးရီးယားဟာ ၾကည့္ေနတာ ပထမရက္ေရာက္ၿပီ...
လူေတြကို အမ်ား ႀကီး အက်ိဳးျပဳပါတယ္ ညီမ blog ေလးက
9/03/2015 9:13 AM
@ဆုျမတ္မိုး - ကြန္မန္႔မေတြ႔တာၾကာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ ေဖ့ဘြတ္ေပၚမွာ ဓာတ္ပံုတင္ျပီး ဘေလာ့ဖတ္ေနတာကို ျပေတာ့ ေပ်ာ္သြားတယ္။ ေက်းဇူး။
@May Oo - ဟီး... အတင္းလာဖတ္ခိုင္းသလိုမ်ား ျဖစ္သြားလား။ အသံုး၀င္တယ္ သေဘာက်တယ္ဆို ေက်နပ္တယ္။
@Soe Yu Htet - Hope to see your photos enjoying there. Must go to all the places I miss. BTW, the bus route of Rotorua has some changes in July 2015. Please do refer to the website for update.
@Hmwe ma - အစ္မ နာမည္မေရးသြားေပမဲ့ ေဖ့ဘြတ္မွာ လာစကားေျပာလို႔ ေက်းဇူးပါ။ အစ္မတို႔ရဲ႕ အသံုး၀င္တယ္ဆိုတဲ့ စကားသံနဲ႔ အားေပးသံေတြေၾကာင့္ ဒီဘေလာ့ေလး ဆက္လက္ရွင္သန္ေနေသးတာ။ ကိုရီးယားခရီးစဥ္လဲ အားလံုးအဆင္ေျပျပီး အစစအေကာင္းေတြခ်ည္းရပါေစေနာ္။
9/03/2015 5:21 PM
ဘယ္လုိ ဘယ္လုိ ဒီ ပုိ႔စ္ကုိ ေက်ာ္သြားမိလဲ မသိဘူး။ အခုမွ ေတြ႔တယ္။ နယူးဇီလန္ေရာဂါက တစ္ေန႔ထက္ တစ္ေန႔ ရင့္လာျပီ။ မေဗဒါ ဘေလာ့ေလး ဘယ္လုိနည္းနဲ႔ မွ ပိတ္မသြားနဲ႔ေနာ္။ ကူးစရာေတြ မ်ားလြန္းလို႔ ပရင့္မထုတ္နုိင္ေတာ့ဘူး။ အြန္လုိင္းပဲ လာလာၾကည့္ရတယ္။